[Topnews:-] Taliyaha cusub ee NISA muxuu ka yiri dilkii Ikran Tahliil ? maxaadse ka taqaanaa?
Friday May 27, 2022 - 04:34:11 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com- Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ansixiyay magacaabida taliyaha cusub. Waxaa si kumeelgaarka ah horey taliaha nabad sugida u ahaa xildhibaan Yaasiin Farey. Hay'ad
Waagacusub.com- Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ansixiyay magacaabida taliyaha cusub. Waxaa si kumeelgaarka ah horey taliaha nabad sugida u ahaa xildhibaan Yaasiin Farey. Hay'adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ayaa ah mid ka mdi ah rukana ugu waawayn uguna muhiimsan laamaha ammaanka dalka.
Mahad Salad ayaa waxbarashadiisii heer Jaamacadeed ku soo qaatya dalka Masar, isaga sidoo kale shaahaha Mastar-ka ku qaatay isla wadanka Masar.
Waxaa lagu xusuustaa in markii uu madaxwayne Farmaajo isku dayay in uu muddo kororsi sameeyso uu ka mid ah dadkii horkacayay ciidamadii loo bixiyay "badbaado qaran”.
"Al-Shabaabka Fahad Yaasiin sheegay in ay dileen Ikraan Tahliil waa ISAGA. Isagaa dilay, duugayna Ikraan Tahliil. Ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa in ay furtaan gal dacwadeed Fahad ka dhan ah,” ayuu ku yiri qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay.
"Qof anaga naga mid ah inta uu nool yahay insha allah kiiska Ikraan Kama hari doono inta caddaalada la horkeenayo dambiilayashii shaarka dowladeed idinku dhibaateeyay” ayuu 24 March ee sanadkan ku soo qoray bogiisa Facebook.